Midi Mfomso a Dɛn na Mɛyɛ?
KENKAN WƆ Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Attié Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Guarani Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Sɛ wotaa gye wo mfomso tom a, ɛma nkurɔfo gye wo di, na wobu wo.
Wo deɛ hwɛ asɛm yi: Tim ne ne nnamfo redi agorɔ, ɛnna ɔbɔɔ bɔɔl maa no kɔbɔɔ obi kar ahwehwɛ.
Wone Tim a, anka wobɛyɛ dɛn?
NNEƐMA MMIƐNSA A WUBETUMI AYƐ:
Wode bɛhyɛ obi.
Wobɛka nea asi no akyerɛ kar wura no, na woaka sɛ wubetua ka.
Anhwɛ a wobɛyɛ nea edi kan no. Nanso sɛ wobɔ obi ahwehwɛ anaa wudi mfomso foforo bi a, ɛyɛ papa sɛ wubegye atom.
Ɛyɛ suban pa.
Bible se: “Yɛpɛ sɛ yɛde nokwaredi bɔ yɛn bra wɔ biribiara mu.”—Hebrifo 13:18.
Wugye wo mfomso tom a, nkurɔfo de wo mfomso befiri wo.
Bible se: “Nea ɔkata ne mmarato so no, ɛrensi no yiye, na nea ɔka na ogyae no, wobehu no mmɔbɔ.”—Mmebusɛm 28:13.
Afei ɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam.
Bible se: “Yehowa kyi okontomponi, na teefo na ɔne wɔn di atirimsɛm.”—Mmebusɛm 3:32.
Karina adi mfe 20. Bere bi, ɔde kar tuu mmirikabɔne maa polisifo kyee no, nanso wammɔ ne papa amanneɛ. Sɛ ɛyɛɛ Karina sɛ obetumi de asɛm no asie a, na ɔredaadaa ne ho. Ɔno ara kae sɛ: “Afe akyi, me papa kohuu polisifo krataa a me din wɔ so. Nea esii deɛ ɛsɛ w’ani!”
Dɛn na osuae? Karina asɛm ne sɛ: “Woyɛ bɔne sie a, wo ara na ɛbɛsan abɛbɔ wo so. Woremfa wo ho nni da!”
Bible se: “Yɛn nyinaa di mfomso mpɛn pii.” (Yakobo 3:2) Sɛ wugye wo mfomso tom a, nea ɛkyerɛ ara ne sɛ wowɔ ahobrɛase na w’adwenem abue. Enti wudi mfomso a gye tom ntɛm.
Afei sua biribi fi wo mfomso mu. Abaayewa bi a ne din de Vera kae sɛ: “Midi mfomso biara a, misua biribi fi mu. Sɛ daakye mihyia tebea a ɛte saa a, mihu sɛnea medi ho dwuma.” Yɛnhwɛ sɛnea wubetumi de asɛm yi ayɛ adwuma.
Woasrɛ wo papa sakre, ɛnna woakɔsɛe no. Dɛn na wobɛyɛ?
Ebia wobɛyɛ dinn asusuw sɛ wo papa renhu akyi.
Ebia wobɛka nea asi no akyerɛ wo papa.
Ebia wobɛka akyerɛ wo papa, nanso wode bɛhyɛ obi.
Wo nsɔhwɛ bae no, na woawe, efisɛ woanyere wo ho ansua adeɛ. Dɛn na wobɛyɛ?
Ebia wobɛka sɛ nsɔhwɛ no yɛ den dodo.
Wubegye atom sɛ wo ara na woansua adeɛ.
Anaa wobɛka sɛ tikya no mpɛ w’asɛm.
Wokɔ so ara dwen mfomso a woayɛ atwam ho a, ɛbɛyɛ sɛ obi reka kar na ɔrehwɛ biribi wɔ n’akyi
Yɛnsan nsusuw nhwɛso mmienu no ho bio. Fa no sɛ (1) wo na wo ba asɛe wo sakre (2) wone tikya no. Sɛ wo ba anaa abofra a wokyerɛ no ade gye ne mfomso tom a, adwene bɛn na wubenya wɔ ne ho? Ɛnde sɛ wokata wo mfomso so a, wo papa anaa wo tikya bebu wo sɛn?
Kaakae mfomso bi a wudii no afe a etwaam no na bua nsɛmmisa a edidi so yi.
Mfomso bɛn na wudii? Dɛn na woyɛɛ wɔ ho?
Mede hyɛɛ obi.
Wokataa asɛm no so? Ɛnde akyiri yi ɛkaa wo sɛn?
Huree—Me na mekɔ no!
Ɛhaw me—Anka ɛsɛ sɛ meka nokware.
Ɛnnɛ a, anka wobɛyɛ dɛn?
Dɛn na wusua fii mfomso no mu?
Adɛn nti na ebinom yɛ bɔne a wɔnka?
Sɛ wokatakata wo mfomso so a, nkurɔfo bebu wo sɛn? Wudi mfomso na woka nokware a, ɛno nso nkurɔfo bebu wo sɛn?—Luka 16:10.
Afe a ɛda w’anim yi, sɛ wudi mfomso a, ɛdɛn na wobɛyɛ?